Shina T-bolt miaraka amin'ny mpanamboatra clamp lohataona mpanamboatra sy ny orinasa | Glorex
Azo ampiana lohataona matevina koa izy io, ampitahao amin'ny lohataona mahazatra, mety tsara amin'ny fifandraisana fantsom-pifandraisana amin'ny fitaovana mavesatra.
Ny fonosana mahazatra dia kitapo plastika, boaty baoritra ivelany. Ho eo amin'ny boaty ny marika.
Ny T-bolt normal miaraka amin'ny clamp lohataona dia ampiasaina amin'ny fifandraisan'ny milina maotera vita amin'ny vy. Lohataona mavesatra be dia be ho an'ny famindrana ny fiara ara-panatanjahantena sy fifandraisana fifandraisana lozisialy.
Ny T-bolt miaraka amin'ny clamp lohataona dia manana ny mampiavaka ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha, mora ny manala, manemotra ny fanamiana, tena azo ampiasaina ary azo fohifohy amin'ny alàlan'ny fanodinana ny hidro mba hahatratrarana ny valiny. Namboarina ho an'ny fantsom-pifamoivoizana mafy sy ny fantsom-pahazavana lehibe mahazatra amin'ny kamiao matevina, milina indostrialy, fitaovana eny an-dalana, ny fambolena sy ny milina.
Previous: Fampitaovana (ho fanamboarana clamp)